Story of Eagles - လင်းယုန်ငှက် ပုံပြင် | mmshare
Story of Eagles - လင်းယုန်ငှက် ပုံပြင်
Submitted by mmshare on Tue, 05/26/2009 - 16:11
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဆင့်ကမ်းလို့ ရလာတဲ့ အီးမေးလ်မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပါ... သဘောကျမိလို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်.. မူရင်းအတိုင်းမပြုမပြင်ဘဲ ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...
“ဒီနေ. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရုံးခန်းမှာ video clip လေးတစ်ခု ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ The Story Of Eagle “လင်းယုန်ပုံပြင်” တဲ့။
လင်းယုန်တစ်ကောင်ဟာ သက်တမ်း ၇၈နှစ်၀န်းကျင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
လင်းယုန်ဆိုတာ ကောင်းကင်မှာ သတ္တိရှိရှိ၊ အင်အားပြင်းပြင်းပျံနိုင်တဲ့ ငှက်မျိုး။ လင်းယုန်တစ်ကောင်ဟာ သက်တမ်း ၄၀ လောက်ရလာတဲ့အခါမှာ အဲဒီလင်းယုန်ဟာ
ကောင်းကောင်းမပျံနိုင်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ.ရဲ့ နှုတ်သီးဟာကွေးလာပြီး ရင်ဘတ်ထိအောင် စိုက်ကျလာတယ်။ အတောင်ပံတွေဟာ မခတ်နိုင်တော့လောက်အောင် လေးလာတယ်။ လက်သည်းတွေဟာ ရှည်လျားလာပြီး အစာရှာဖို.ခက်လာမယ်။ အဲဒါဟာ လင်းယုန်တိုင်းပါပဲ။
အဲဒီမှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းနှစ်ခု ရှိတယ်။ တစ်ခုက ကောင်းကောင်းမပျံတော့ဘဲ သေပွဲ၀င်ရမယ့် နေ.ကိုထိုင်စောင့်ဖို.။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျန်တဲ့သက်တမ်း ၃၈နှစ်ကို ကောင်းစွာပျံသန်းရင်း အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို.။ အဲဆက်ပြီးရှင်သန်ဖို.ဆိုရင်တော့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို အဖြစ်မနေဖြတ်သန်းရမယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်နာမည်က Pain and Difficulites “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ။ ပထမဆုံး ကျောက်တောင်ထိပ်ကြီးတွေပေါ်ကို ပျံသန်းသွားရမယ်။ အဲဒီ ကျောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ရင် နှုတ်သီးကို ကျောက်သားနဲ.ဖဲ့ချိုးပစ်ရမယ်။ တစ်ခါနှုတ်သီး နဲ. လက်သည်းတွေကို ဆွဲခွာပြီးနှုတ်ပစ်ရမယ်။ ဘယ်လောက်များနာကျင်လိုက်လေမလဲ။ ဘယ်လောက်များ ခက်ခဲလိုက်လေမလဲ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ။ အသက်ရှင်ချင်သူကိုယ်တိုင်လုပ်မှရတာမျိုးပါ။ ပြီးရင်တော့ ရက်အနည်းငယ်ကြာကြာ တောင်ထိပ်မှာနေပြီး လက်သည်းတွေ နှုတ်သီးတွေ ပြန်အသစ်ထွက်ပြီး အသားကျလာတဲ့ အထိစောင့်ရတယ်။ ပြီးရင်တော့ အဲဒီလင်းယုန်ဟာ ကျန်တဲ့သက်တမ်း ၃၈ နှစ်ကို ရှင်သန်ခွင့်ရသွားပြီ။
ဒုတိယလမ်းကို ရွေးချယ်ကြတဲ့လင်းယုန်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။
ကျွန်မတို.ကလူသားတွေပါ။ ငှက်တွေတောင် အကျိုးစီးပွား တစ်ခုအတွက်နာကျင်မှုနဲ့ အခက်အခဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ကျော်နိုင်သေးရင် ကျွန်မတို.လို လူသားတွေက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ အရောက်သွားဖို. ဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို. “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို မဖြစ်မနေ ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့။
ကျွန်မတို. လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားဖို. တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို.တစ်တွေ အရမ်းနာကျင် ကြရမယ်။ အခက်အခဲတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ကျော်ဖြတ်ကြရမယ်။ ကျွန်မတို. ကျော်ဖြတ်ကြမယ်လေ။ အဲဒီ “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ကျွန်မတို. အတူတူဖြတ်ကျော်ကြရအောင်ပါလေ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးကျန်တဲ့သက်တမ်းတွေကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ရှင်သန်ရဦးမှာမို့ပေါ့။ ကျွန်မတို့တွေဟာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးကြမယ့်သူတွေ
More articles in Other category